Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021 - Independent Oromia
Tarkaanfii WBO: Magaalaa Naqamtee fi naannoo sanitti
Tarkaanfii WBO’n, Magaalaa Naqamtee fi Onoota Konyaa Baha Wallaggaa keessatti argaman garaagaraa keessatti, Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayerattii irratti, guyyoota sadan darban fudhateen, Loltoonni MKII danuun galaafatamuu.
Tarkaanfii kanaan kan rifatan loltoonni mootummichaa, dargaggoo Oromoo tokko, Magaalaa Naqamtee keessatti rasaasaan erga rukutanii booda, mataa isaa irra konkolaataa oofanii buruksuun, haala suukanneessaan ajjeesuu.
Hammaachuu hidhaa fi ajjeechaa Loltoota MKII
Hidhaa fi dararaan Uummata Oromoo Walloo irratti raawwatamu akka-malee hammaachuun, manneen hidhaa guutanii, Oromoonni manneen barnootaa keessatti hidhamaa jiraachuu.
Gama kaaniin, miseensonni Raayyaa Ittisaa fi Poolisii Humna Addaa [Oromiyaa], kanneen dhiigaan Oromoo ta'an danuun milishootaa fi Faannoo Naannoo Amaaraan ajjeefamuu; danuun isaanii ammoo Hawaasa Oromoo Wallootti baqachuu.
Gindabarat: Haala hamtuu Uummani Oromoo keessa jiru
Saamichi qabeenyaa, akkasumas, hidhaa fi dararaan, Lixa Shaggar, Ona Gindabarat, Ganda Taraaraa jedhamtu keessatti, Uummata Oromoo irratti raawwatamu hammaatee jiraachuu.